चन्द्र प्रसाद सापकोटा
दुई दिनको जिन्दगी कत्ति टेन्सन लिने हो । एकदिन मरेर जानैपर्छ । फेसबुकमा मानिसहरुले एकअर्कालाई कुरा काटिरहेको देख्छु । कुरा काटेर पाउनु के छ र ? दुई दिनको जिन्दगी हाँसौँ गाऔं रमाऔ … । जत्ति नै ठूला गफ गरेपनि हामी नेपालीले अर्काको देशमा आएर दुःख नगरी हुँदैन । त्यसैले टेन्सनलाई साइडमा राखौं, अरुलाई गाली गर्न छोडौं ।
देशको सबैलाई चिन्ता लाग्छ, मलाई पनि लाग्छ । देशमा यस्ता घटनाहरु भइरहेको देखिरहेका छौं । गर्ने के त ?
– राजा फ्याँकिए ।
– सिके राउत जन्मिए ।
– पृथ्वीनारायणलाई बिर्सिए ।
-प्रधानमन्त्री सालमा ४ जनासम्म देखिए ।
– जनताभन्दा नेता धेरै भए ।
– भारतले देशको साँचो लगिसक्यो ।
– नियम कानुन हुनेखाने र गुण्डाहरुलाई लाग्न छोड्यो ।
– नेपाल रहने-नरहने निश्चित हुन छोडिसक्यो ।
– राम्रो गर्न खोज्नेले २ महिना पनि देश चलाउन पाउँदैनन् ।
– नेपाली युवा दिनदिनै ३/४ हजार अरु देशमा काम गर्न जानुपरेको छ ।
त्यसैले साथी हो, हाम्रो अगाडी यी कुरा भएर पनि हामी यहाँ होटलमा पाले बसेर, ट्वाइलेट सफा गर्दै, कन्ट्रक्सनमा बेल्चा उचाल्दै फुर्सद हुनासाथ यहाँबाट फेसबुकमा कराएर केही हुनेवाला छैन l हुने कुरा भै हाल्छ l जुन कसैले रोकेर रोक्न सक्दैन । आफु बाँच्ने मेलो गरौं, खुसी हुन कोसिस गरौं । यहि नै हो सबै भन्दा ठूलो कुरा l
विदेशमा दुःख गर्दा कहिलेकाँही सारो गारो पर्छ, सबैले मिलेर सहयोग गरौं, किनकी नेपालीलाई नेपालीले नै हेर्ने हो अरुले हेर्दैन । देशमा मिल्न नसके पनि यहाँ चाहिँ मिलेर बसौं, यो पार्टी को यो मान्छे हो, त्यो पार्टी को यो मान्छे हो भनेर नछुट्याऊँ, राजनीतिक आस्था सबैमा हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ l तर अर्काको देशमा राजनीति होइन, सामाजिक सेवा गरौं l
चन्द्र प्रसाद सापकोटाclose